NOLOSHA QOYSKA: 10 arrimood oo ay raggu sameeyaan, dumarkuse ka xanaaqaan!! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka NOLOSHA QOYSKA: 10 arrimood oo ay raggu sameeyaan, dumarkuse ka xanaaqaan!!
NOLOSHA QOYSKA: 10 arrimood oo ay raggu sameeyaan, dumarkuse ka xanaaqaan!!
(Hadalsame) 07 Okt 2021 – Waxaa jira arrimo ay jecelyihiin ama neceb yihiin bina’aadamka. Waxaa jira kuwo uu in yar jecel yahay ama neceb yahay.
Dumarku, sidoo kale, iyagoo qayb ka ah bani aadamkaas, waxay leeyihiin waxyaabo ay jecel yihiin iyo kuwa ay naceb yihiin .
Hadaba, waxaa jiro waxyaabo ay dumarka aad uga xanaaqaan oo ay naceb yihin ayna u arkaan waji-gabax.
Waxyaabahsaasi waxaa ka mid ah 10 shey ee soo socda.
10: Daawashada ciyaaraha
Ragga waxay jecel yihiin kubadda cagta. Haddii ay jiraan wax isu keena oo ragga kulmiya waa isboortiga, gaar ahaan kubadda cagta.
Xitaa haddii haweeneydu jeceshahay inay daawato cayaaraha, ninka wuxuu ku faraxsan yahay in asxaabtiisa ay ciyaarta ka wada daawadaan garoomada ama si wadajir ah ay telfishinada uga fiirsadaan iyaga oo ku sugan hal goob, sida maqaayad ama gurigiisa.
Inta ay ciyaarta socoto Si wada jir ah ayay u qayliyaan, way ku murmaan, waxaa jira waqtiyo ay ku hadlaan erayo ama luuqad aan wanaagsanay oo kaftan ah.
Ragga waxaa qiimo wayn u leh xilliga ciyaarta ay socoto. Waxay waqti ka badan kan uu lamaanihiisa la joogo ku qaataa goobaha ciyaaraha.
Dumarka waxay dareemaan in la takooray oo aan mudnaanta la siinin… waxayna u maleeyaan in aysan qeyb ka ahayn nolosha ragga, inta lamaanahooda ama saaxiibadood ay la daawanayaan kubadda cagta.
9: Eegidda dumarka kale
Waxaa jiro waxyaabo ay dabeecad u leeyihiin ragga taas oo qeyb ka ah hidde-sidaha, waana wax ka baxsan awooddiisa.
Si kasta oo uu ugu faraxsan yahay xiriirka uu la leeyahay lamaanihiisa ama qofka uu xiriirka jacey kala dhaxeeyo, marka uu arko haweeney qurux badan oo hormareysa wuu eegaa.
Hadda waxay ku xiran tahay inta uu ninka eegayo iyo sida uu u dareemayo iyo waliba sida ay u fasirto lamaanihiisa.
Ragga qaar ayaa is xakameeya oo ma jeestaan ​​markay la joogaan lamaanahooda, haddana wuxuu fursad u helayaa inuu eego ‘lamaanihiisa quruxda badan ee soo jiidashada leh’.
Arrintaas waa mid dumarka badankooda aysan jeclayn. Ma jecla nimankooda ama lamaanayaashooda in ay eegaan dumarka kale.
8: In aad ka caawin waydo hawlaha guriga
Haddii aad xaas leedahay waxaa muhiim ah in aad wadaagtaan mas’uuliyadaha kala duwan sida nadiifinta, dhaqidda, xitaa karinta cunadda.
Haddii aad tahay qof xaaskiisa la qabto howsha guriga, wax dhib ah kalama kulmi doontid xaaskaaga. Waxaa laga yaabaa in ay kuu qaado darto jaceyl dheeraad ah, laakiin haddii aad isbeddel samayso, waxaa laga yaabaa in aysan kaa joojin jacaylkaaga laakiin aysan jeclaysanin waxa aad sameyneyso.
7: In aadan dhageysanin
Fikradda ugu weyn halkan waa in haweeneydu hadasho, ninku uu dhegeysto. Laakiin nasiib darro taasi mar walba suurtogal ma ahan.
Waxay ku xiran tahay arrimaha haweeneyda ka hadlayso iyo sida uu ninka u aqbalo.
Si kasta oo ay muhiim u tahay hadalka gabadha, sida ay dumarka qaar u soo bandhigaan, waa mid aysan ragga qaar qaadanin oo aysan dhageysan.
Haddii haweeneyda ku celiso arrinta in ka badan saddex jeer oo uusan ninka ka falcelinin, dumarka badankooda ma daneeyaan arrintaas.
6: Inaa aadan samaynin waxyaabo kadiska ah
Ma jirto waxa ay dumarka kaga farxad badan yihiin in aad u sameyso waxyaabo kadis ah oo ka farxiya, marka loo eego inay sameyso waxyaabo ay dhankaaga kaaga yaabiso adigoo naxsan.
Iyada oo aan ogeyn, waxaad u iibin kartaa waxyaabo aysan fileynin taas oo ah wax dumarka inta badan farxad galiya.
Waxaa laga yabaa in ragga ay waxyaabahaas yaryar ay u arkaan kuwa aan muhiim ahayn, balse dumarka waxay u tahay waxyaabo ay ku farxaan.
5: Quurada xilliga hurdada
Arrintani waa mid adag oo waa wax dabiici ah oo aan waxba laga qaban karin.
In kasta oo ay caddahay in dumarka ay dhankooda khuurin karaan, haddana dumarka ayaa inta badan dhibsada oo jeclayn ragga quuriya.
4: Diidmada in aad qabato labo shaqo halmar
Ragga hal mar ma qaban karaan wax ka badan hal shaqo, waxaa taa sabab u ah arrin dabiici ah. Markuu bilaabo inuu hal shaqo qabto, wuxuu maskaxdiisa oo dhan u jeediyaa shaqadaas oo keli ah.
Wuxuu 100% diirada saarayaa hawsha hortaala, markuu dhameeyo wuxuu bilaabayaa shaqo kale.
Dumarku waxay awoodaan in dhowr shaqo ay hal mar isla qabtaan, waxaa laga yaabaa in ay cunto karinayso, maacuunta dhaqayso, isla markaasna cunugeedu dhabarka u saaran yahay.
Ninka ilaa uu mid dhammeeyo mid kalena ma bilaabo.
Dhibaatadu waxay bilaabmaysaa marka haweeneyda ay damacdo in lammaanaheeda uu sideeda oo kale u dhaqmo, Laakiin waxaa suurtogal ah in ninka uu sadaa sameeyo isagoo waqti badan galinaya.
3: In aad wax xun ku dhahdo meel fagaaro ah
Ragga badankood dabeecad ahaan ma xishood badna marka loo eego dumarka.
Waxaa laga yaabaa inuu ninka meel fagaare ah eray ku yiraahdo lamaanihiisa, laakiin haweeneyda xitaa ma qiran karto inay sidaas samaysay, sababtoo ah waa dabeecadda xishoodka ee uu Alle ku abuuray.
Dumarka badankooda ma jecla inay arkaan ama maqlaan nin meel fagaare ah ku dhahaya hadallo adag. Si kadis ah ama si ula kac ah kama ahan ba.
2: In aad la wareegto rimuudka TV-ga
Tani waa wax yar marka la eego, laakiin dumarka agtooda waa wax ku weyn.
Dumarka waxay jecel yihiin inay TV-yada ka daawadaan waxyaabo badan, kuwaas oo qaarkood laga yaabo inay u muuqdaan kuwo aysan raggu jecleyn.
Waxyaabo sida cuntada, kuwa la isku qurxiyo iyo riwaayadaha ayaa laga yaaba in ay daawato. Halka ninkana u arko inuu u baahan yahay daawashada kubbadda cagta ama filimada cabsida ah.
1: Qirashada khaladaadka
In uu dhaho waan khaldamay, waa wax ku adag ragga qaarkood, xitaa haddii ay khaldan yihiin.
Waxaa jiro kuwa u malaynaya haddii ay yiraahdaan ‘waan khaldanahay’ ama haddii ay ka hor qirtaan xaasaskooda, ay la mid tahay sida in uu guuldareystay.
Si kale haddii loo dhigo, ninka ma rabo in loo arko inuu daciif yahay, laakiin qirashada ma ahan daciifnimo, haweenkana waxay dareemaan mudnaan marka dembiga qof walba arko inuu qirto.
Previous articleRAQBA WAA KU RAGGEED: Su’aalo ku socda culumada Somaliland oo ku saabsan sababta ay u aamusan yihiin?!!
Next article”Waxaan Al-aqsaa ku dhex dukanaynaa annagoo aamusan!” – Maxkamad Israeli ah oo soo saartay xukun gardarro ah (Hal dal oo Muslim ah oo ka hadlay)